I-alumina ephezulu ye-alumina bobbin China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Textile Ceramics > I-General Textile Ceramics > I-alumina ephezulu ye-alumina bobbin
I-Model No.: JH.TC.005
I-alumina bobbin coam
Esimweni esivamile, sizophothula ingxenye yesikhombi socingo ukuba sibuke ubuso ukuze sikwazi ukunciphisa ukungqubuzana. Sine-prototyping ekukhiqizeni ivolumu eliphezulu kakhulu. Ngakho sisekela i-oda lokuhlola, uhlelo lwe-R & D.
Umhlahlandlela we-ceramic bobbin uvame ukwenza ngo-95%, 99% i-alumina. It has a kangcono ukugqoka ukugqoka, izici low friction kuka plastic kanye metal. Yiqiniso, kuyindleko ephumelelayo kune-bobbin yensimbi ye-ceramic. Ukuze ukwandise impilo yokusebenza yedivayisi, i-Ceramic bobbine iye yasetshenziselwa kakhulu imishini yamattile.
Ikhwalithi ephezulu ye-alumina iciramic tube